Lammiileen Ertiraa Gamtaa Afriikaa Finfinneetti argamutti mormii dhageessisan - BBC News Afaan Oromoo
Lammiileen Ertiraa Gamtaa Afriikaa Finfinneetti argamutti mormii dhageessisan
Baqattoonni Ertiraa Finfinnee fi kaampiiwwan godaantotaa garaa garaa jiraatan hiriira magaalaa Asmaraatti yeroo darbe bahe deeggaruun waajjira olaanaa gamtaa Afrikaa fuuldura hiiriira nagaa bahan.
Namoonni kaleessa hiriira bahan kunneen Afaan Tigree fi Arabaan, ''Barumsii fi amantiin mirga namoomaati, kan hidhaman haa hiikaman, ummanni Ertiraa Musliimnii fi Kiristaanni tokkodha! Abbaa irrummaan nu gahe. Haqa barbaanna,'' jedhu dhageessisaa dallaa gamtaa Afrikaatti walgahuun barreeffama isaanii bakka bu'aa Gamtaa Afrikaaf kennaniiru.
Finfinneen alatti naannoo Tigraayittis, lammiileen Ertiraa kaampiiwwan Maay Aynii, Histaast, Shimalbaa fi Addi Haruush hiriira nagaa taasisaniiru.
Akkasumas kaampiiwwan naannoo Afaar kanneen akka Baraahila, Asaayittaa, kaampiiwwan lama kaanittis godaantonni Ertiraa itti qubatanitti hiriira mormii taasisaniiru.
Hiriira mormii Finfinnee taasifame irratti kan hirmaate dargaggeessi Girmaay jedhamu akka jedhetti, ''lammiileen Ertiraa waan dararamaa jiranif obbolonni keenya musliima ta'an nagaan barachuu waan hin dandeenyef mormii daandiitti bahani dhageessisan deeggaruufi kan hiriira bahe.''
Kaayyoon namoota hiriira bahan kunneen bakka buutonni Ertiraa Gamtaa Afrikaa keessa jiran, Gamtaan Afrikaa fi biyyoonni hunduu sarbama mirga namoomaa Ertiraatti mudataa jiru akka mormaniifi jedheera dargaggeessi kun.
Akkasumas lammiileen baqataniifi hidhaa jiran, hojii dirqii waraanaa dargaggoonni hojjetan keessaa akka bahanif gahee isaanii akka gumaachan gaafachuufi jedhaniiru hirmaattonni.
Dubartiin waggaa lamaaf Ertiraatti hidhamte turtee fi kan baqatte Heelan G/Amlaak gama ishiitin lammiilee magaalaa Asmaraa naannoo Ahiriyaatti bahan deeggaruuf hiriira akka baate dubbatte.
Lammiileen Ertiraa bakkeewwan addunyaa adda addaa jiraatanis hiriira kanaan dura Ertiraatti taasifame deeggaruun hiriira bahaa jiru.
Keessumaa hiriira Finfinneetti taasifame irratti Gamtaa Afrikaatti bakka buutota mootummaa Ertiraa imeelii fi bilbilaan dubbisuuf yaaliin taasisne hin milkoofne.
Mormii Asmaraatti kaleessaa taasifame hordofe dargaggoonni hidhamaa jiru